လက်ကား Suchi & Fruit Compostable Container ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Skypurl
တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်တွေကိုတင်းကျပ်တဲ့တားမြစ်မှုအဖြစ်တစ်ခါသုံးတစ်ခါသုံးအစာပုံးအတွက်ငါတို့ဘာသုံးသင့်သလဲ။ Skypurl's cornstarch အစားအစာကွန်တိန်နာက၎င်းကိုကူညီလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစားအစာကွန်တိန်နာသည်တစ်ခါသုံးအစားအစာကွန်တိန်နာ၏အဖြူရောင်ညစ်ညမ်းမှုကိုကျိန်းသေစေသောသဘာဝနှစ်စဉ်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစက်ရုံပစ္စည်းများနှင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
490ml2ပိုင်း
460ml3အစိတ်အပိုင်းများ
450ml4အစိတ်အပိုင်းများ
အဖုံးများပါသော Skypurl's Cornstarch Suchi & Fruit Containers များသည်ဂျပန် Suchi၊ အသုပ်နှင့်အသီးကဲ့သို့သောအခါသမယအမျိုးမျိုးတွင်အသုံးချနိုင်သည်။ ဒါဟာမင်းရဲ့နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မိသားစုဆုံဆည်းမှု၊ ကွဲပြားတဲ့ပါတီတွေ၊ စီးပွားရေးအုပ်စုထမင်းစားပွဲစတာတွေအတွက်ပြီးပြည့်စုံတဲ့တစ်ခါသုံးပန်းကန်ခွက်ယောက်ပါ။
1. Eco-friendly materiaSoak အထောက်အထား
4. Microwavable နှင့် frozen Safe ။
ယခင်: Eco Compostable Rectangle အစားအစာကွန်တိန်နာ
နောက်တစ်ခု: အိမ်မွေးခွေးအိတ်များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်အိတ် Poop အမှိုက်ပုံး Poop စိတ်ကြိုက်ခွေးအမှိုက်အိတ်များကို Biodegradable ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Compostable Lunch Containers များ